Home Wararka Baarlamaanka Galmudug oo xujo culus dul dhigay ansaxinta Musharaxiinta Qoor-Qoor soo magacaabay
Baarlamaanka Galmudug oo xujo culus dul dhigay ansaxinta Musharaxiinta Qoor-Qoor soo magacaabay
Guddiga qabashada Doorashada Aqalka sare ee Baarlamaamka Galmudug ayaa amar culus duldhigay ansaxinta liiska Qoor Qoor soo gudbiyay
Go’aanka ay qaateen baarlamaanka Galmudug ayaa ah kuwo ka adag habraacii maamul goboleedyada kale kuwaas oo si fudud u ansaxiyay liiska musharaxiinta la soo gudbiyay.
Mid kamida Qodobada ugu culus ee habraacan ayaa ah inaan cod gacan taag ah loogu codeyn musharaxii loo tanaasulo, balse uu ka raadsado xildhibaanada cod kalsooni ah.
“Haddii musharax uu u tanaasulo musharax kale, waxaa qasab ku ah musharaxa loo tanaasuley in sanduuqa cod qarsoodi ah loogu codeeyo, oo hadii uu waayo 50+1 tirada guud ee Baarlamaanka Galmudug loo celiyo madaxwaynaha markale,” ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay guddiga qabashada doorashada Galmudug.
Go’aanka kasoo baxay guddiga doorashada Galmudug ayaa ah mid looga hortagayo in musharax loo tanaasulo kadibna midka kale uu si toos ah usoo baxo.
Taalaabadan ayaa xaqiijin doonta in baarlamaanka Galmudug uu soo saaro senator ka duwan kuwa Qoor Qoor rabo ama isaga dib loogu celiyo si uu markale u soo magacaabo.
Halkaan ka aqriso qoraalka ka soo baxay baarlamaanka Galmudug